किन गरिन्छ योनी छेदन ? – Mission
किन गरिन्छ योनी छेदन ?
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १७, २०७२
एजेन्सी– महिलाको योनि छेदन गर्ने एक निर्दयी संस्कारलाई कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचलन कायमै रहेको छ । भारतको एउटा सानो बोहरा मुस्लिम समुदायमा यो कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ । बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुसस्कारलाई हटाउन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कुप्रथामा कुनै कमि आएको छैन् । जसका कारण अधिकांश महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
‘महिलाको यौन इच्छा नियन्त्रण गर्नु र उनलाई यौन कार्यमा कम आनन्ददायी बनाउनु यसको मुख्य उदेश्य हो,’ उनी भन्छिन् ।
कुनैबेला अफ्रिका र मध्येपूर्वका विभिन्न देशहरुमा एफएमजी गरिन्थ्यो । तर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भने यसलाई निकै गोप्य रुपमा राखियो । यो प्रथा इन्डोनेसियामा अझै पनि विद्यमान रहेको बताइन्छ ।
सन् २०१२ को डिसेम्बरमा राष्ट्रसंघको साधारण सभाले एफजीएमलाई निर्मूल गर्ने एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । स्थानीय भाषामा यसलाई खाट्ना वा योनिच्छेद बताइन्छ ।
‘एफजीएम अझै भित्र भित्रै गोप्य रुपमा गरिन्छ,’ चेन्ज डट ओराजी की प्रिती हरमानले बीबीसीलाई भनिन् । ‘पहिलो पटक भारतका महिलाहरुले एफजीएमकाबिरुद्धमा बोलेका छन् । सन्देश स्पष्ट छ–एफजीएमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । ’ उनले भनिन् ।
कला इतिहासकार हाबिबा इनसाफ तथा सो समुदायकी सदस्य भन्छिन्, ‘यो प्रथा अझै पनि कोरियामा विद्यमान छ । हाम्रो समुदायका कोही पनि मानिसले यसको बारेमा नबोलेकोले योनिच्छेदको कुप्रथा कायमै देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘क्लिनिकल्ली निपूर्ण व्यक्तिले यो कार्य नगर्ने हुँदा विभिन्न समस्या आउने गरेका छ । एफजीएम गर्दा गर्र्दै कतिपय बालिकाको मृत्यु समेत भएको छ,’ इन्साफले भनिन् ।
योनीछेदन विधि विभिन्न जातीय समूहहरुबीच फरक फरक हुन्छ । जस्तैः योनीको भंगाकुर पत्र र मुन्डलाई हटाइन्छ भने कुनै समुदायले योनी मुखको भित्रि भोगस्ठ (लेबिया) लाई हटाउछन् । मुत्र निकास हुन र मासिक धर्मको समयमा अबरोध नहोस भनेर सानो द्वार राखिएको हुन्छ । सहबास र बच्चा जन्माउँदा योनी आफै खुल्ने बताइन्छ । यस पक्रियाले योनीमा संक्रमण, दीर्घकालिन पीडा र बच्चा जन्माउदा समस्या हुने बताइन्छ । चिकित्सा विज्ञानमा अहिलेसम्म यसको कुनै फाइदा उल्लेख गरिएको छै् ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १७, २०७२ 1:25:30 PM |
Prevजाडोमा कसरी जोगाउने ओठ
Nextनेवि संघ पूर्वअध्यक्षहरूको समर्थन कोइराला कि देउवालाई ?